Kusoo dhawaada maqaalkeena todobaad laha ah ee aan kaga hadalno warbixino ku saabsan filimada dhawaan la daawan doono iyo kuwa haatan shaqada laga haayo:
Atooraha laga daba dhacay Ayushmann Khurrana oo sanadkii hore la imaaday labada filim HIT-ka noqdeen Badhaai Ho iyo Andhadhun ayaa haatan bilaabay jadwalka labaad duubista filimkiisa Dream Girl kana bilaabatay magaalada Mumbai waxaana jadwalkan ku wehliso atirishada filimkan Nushrat Bharucha. Sidoo kale filimkan jaceylka iyo shactirada isku jiro waxaa Director ka ah Raaj Shaandilyaa halka Ekta Kapoor soo saare ka tahay.
Shahid Kapor iyo Kiara Advani ayaa duubis ku wadaan filimka Kabir Singh ee sheeko ahaan laga soo min guuriyay filimka Arjun Reddy ee Telugu sameeyeen. Filimkan waxaa Director ka ah Sandeep Vanga oo horey Arun Reddy u sameeyay waxaana la daawan doonaa 21 June 2019.
Varun Dhawan ayaa si rasmi ah usoo gaba gabeeyay jadwalka filimkiisa weyn Kalank waxayna jaceyl ku wadaagayaan Alia Bhatt balse filimkan weyn doorar muhiim ah waxaa ku leh Madhuri Dixit, Aditya Roy Kapur, Sonakshi Sinha iyo Sanjay Dutt. Qorshaha wuxuu yahay Kalank in la daawado 19 April 2019 waxaana Director ka ah Abhishek Verman halka Karan Johar iyo Sajid Nadiadwala soo saarayaal ka yihiin.
Hadal heynta filimka Total Dhamaal siweyn ayay u sareysaa waxaana la wada sugayaa goos gooska filimkan oo maalinta berito ah lasoo bandhigaayo waxaana mashruucaan weyn tiyaatarada la saari doonaa 22 Feb 2019 ayadoo ay hogaamiyaal ka yihiin Ajay Devgn, Anil Kapoor, Madhuri Dixit, Arshad Warsi, Retiesh Deshmukh iyo kuwo kale.
Sonakshi Sinha ayaa duubis ku bilaabeyso dhawaan filimka fariinta waaqici ah xambaarsan ee aan magac loo bixinin waxaana la jilayaan Varun Sharma, Annu Kapoor iyo Kulbhushan Kharbanda. Sidoo kalena waxaa Director ka ah Shilpi Dasgupta waxaana la daawan doonaa 2 Aug 2019.
Rajkummar Rao iyo Fatima Sana Shaikh ayaa si rasmi ah duubis ugu bilaabeen filimka jilaayaasha badan kasoo muuqanayaan ee Anurag Basu iska leeyahay waana qaybta labaad ee filimkii caanka ahaa Life In A Metro.
Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay aragtida kowaad filimka Made In Heaven waxaana wada jilayaan Jim Sarbh, Kalki Koechlin, Sobhita Dhulipala, Arjun Mathur & Shashank Arora waxaana Director ka ah Zoya Akhtar ayadoo la daawan doono filimkan 8 Maarso.
Farhan Akhtar ayaa la midoobay Director Rakeysh Omprakash Mehr waxayna wada sameenayaan filimka feerka ah Toofan ayadoo horey labadan ay u sameeyeen filimka HIT-ka weyn noqday Bhaag Milkha Bhaag.
Akshaye Khanna iyo Richa Chadha ayaa si rasmi ah duubis ugu bilaabeen filimka Section 375 waxaana Director ka ah Ajay Behl halka TSeries & Panorama Movies ay isla maal galinayaan.
Suldaan Mahesh Babu filimkiisa Maharshi la daawan doono 5 April 2019 ayaa la sheegay in Af Hindi lagu daawan doono madaama filimkan Telugu ah ay soo dalbanayaan dadka Waqooyiga Hindiya ku nool waxaana ugu wacan in aflaanta Koonfur Hindiya sheeko ahaan Hindiya dhan soo wada jiidanayaan kana baxeen xiligii lagu tilmaami jiray filim goboleed.
Waxaa Aqrisay 777